Warshadaha balliga Wool DrWool iyo soosaarayaasha | Huasheng
Kubadda Suuliga ee Wool
Qalabka:100% Wool New zealand Wool, ama caado
Miisaan kubadeed: 12g, 15g, 20g, 42g, 55g, 85g, 100g
Dhexroor kubadeed:4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm, 9cm, 10cm
Midab: Samee si aad u dalbato
Xidhmada: Bacda dharka 6 xirmada, ama loo sameeyay in la dalbado
Logo: sameeyey in la dalbado
Kubadaha qallalan ee dharka dhogorta waxaa had iyo jeer laga sameeyaa 100% dhogorta New Zealand. Ma furfuri doonaan oo sannado ayey socon doonaan. Cabirkoodu waa ku habboon yahay wax ku-oolnimada ugu badan. Waxay aad ugu fiican yihiin daadinta waxyaabaha baalalleyda sida dushooda iyo jaakadaha. Isticmaalida kubbadaha qalajista dhogorta waxay ka badbaadisaa maqaarkaaga kiimikooyinka loo isticmaalay go'yaha qalajiyaha iyo qalabka jilicsan ee dharka lagu dhaqo, waxayna sidoo kale ka badbaadisaa qalajiyaha haraaga ka haray kuwan. Waa bedel dhaqaale oo lagu ridayo kiimikooyinka lagu ridayo xaashiyaha qalajiyaha iyo kuwa dharka lagu nadiifiyo. Waxaa si gaar ah loogu talinayaa xafaayadda dhallaanka iyo dharka, iyo dadka leh maqaarka xasaasiga ah.
* Iskuday inaad udhamiso kubbadaha qalajiyaha adigoo ku ridaya dhawr dhibcood oo saliid ah (lavender, liin, iwm) kubadiiba. Tani waxay si fudud u ururin doontaa dharkaaga!
* Hoos u dhig astaamaha adigoo hubinaya in dharka aan aad u qallajin. Isku day inaad dharka ka bixiso si dhakhso badan sida aad caadada uhesho.
* 3 xirmo oo kubadaha Wool ah ee Wool loogu talagalay culeys yar.
* 6 xirmo oo kubadaha Wool Dhirta ah oo culeys ballaaran.
Waa maxay sababta loo xusho kubadaha qallalan ee Suulkeena?
Sii daayo Dharka Dharka ah ee Nugul iyo Nugul: Waxay ka caawisaa yareynta xarkaha isku dheelitiran iyadoo yareyneysa xiriirada ka dhexeeya dharka. Dhaqista dharka ayaa si khafiif ah u jilcin doonta oo laalaabkii ayaa looga hortagayaa si wax ku ool ah dartiis oo yaraatay awgeed.
Daryeelka Dharkaaga iyo Maqaarkaaga: Noocyada jirka, dhar-dhaqidda dharka, hypoallergenic, kiimikooyin ama waxyaabaha lagu daro ee aan waxtarka lahayn. Aad ayey ugu fiican yihiin maqaarka xasaasiga ah, shukumaanada, raaxada, dharka, dharka dhaqaanka, dharka xafaayadda iyo dharka xayawaanka iwm dharkaaga.Isoobi waqtigaaga qalajinta 20% -45%.
Xulashada Saaxibtinimo ee Saaxiibtinimo: Si ka duwan xaashiyaha qalajiyaha ee had iyo jeer u baahan in la tuuro ka dib isticmaal kasta, kubadahayaga dib loo isticmaali karo ee kubadaha jilicsan ayaa kaa caawin kara inaad lacag dhigato, yareeyso qashinka oo aad dharkaaga ka sii jilicsan tahay sidii hore.
1. Xaraashka gacanta, waa la istcimaali karaa
2. Qalajinta dhaqsaha, tamarta keydinta
3. Hoos u dhig korantada
4. dhogorta dabiiciga ah, kiimikooyin la'aan
1. U isticmaal 3-4 kubbadood culeys yar / dhexdhexaad ah iyo 5-6 kubbadood culays weyn.
2. Si loo isticmaalo, kaliya geli qallajiye oo halkaas ugu dhaaf. Fudud!
3. Waxaad ku dari kartaa caraf udgoon dharkaaga adoo ku ridaya dhawr dhibcood oo saliid muhiim ah kubada kasta.
4. Looma baahna in lagu nadiifiyo kubadaha dhogorta qalajiyaha ah maadaama ay ku jiraan qalajiyeyaal kaliya dhar nadiif ah
5. Hase yeeshe haddii ay u baahdaan la nadiifiyo oo keliya meel weelka lagu qalajiyo oo diiran oo qallajiye lagu qalajiyo.
Hore: Suudh dhalaalaya (kiiska muraayadaha indhaha)
Xiga: Wuu jeexjeexay Suufka